कांग्रेस कतै नेकपा फुटे सरकार बनाउने आशले र्‍याल त चुहाइरहेको छैन? नत्र किन चुप? - Everest Dainik - News from Nepal
विश्व मानवजातिको अस्तित्व नै रक्षात्मक तुल्याउने गरी जन्मिएको कोराना भाइरस (कोभिड–१९)बाट नेपाल अछुत रहने कुरै भएयन । आज नेपाल यो महामारिले आक्रान्त भइरहेको छ । दिनप्रतिदिन कोराना भाइरस हावासरी समुदायमा फैलिरहेको छ । लामो समयको लकडाउनले देशको अर्थतन्त्र डामाडोल छ । लकडाउन खुले पनि व्यापारव्यवसाय ठप्प छ ।
अहिलको अवस्था भनेको देशको रक्षा गर्ने हो । देशको अर्थतन्त्र जोगाउने हो । जनतालाई राहत उपलब्ध गराउने हो । जनताको सेवा गर्ने हो । जनताको आवाज सुन्ने हो । जनतालाई जवाफ दिने हो ।
काम नपाएर मजुर साँझबिहानको छाक टार्न कठिन समयमा छन् । धेरै व्यक्ति रोजगारी गुमाएर बसिरहेका छ्न । नेपालको अर्थतन्त्रको बलियो आधार पर्यटन व्यवसाय ठप्प छ । विदेशी रेमिटान्स शून्य जस्तै छ । भन्सार कर, अन्य कर तिर्ने आधार कम भइसकेका छन् । मानिस अहिले पनि बाहिर निस्किन डराईको अवस्था छ । किसानले मलबिउ पाइरहेका छैनन् । उत्पादित तरकारी लगायत कृषिजन्य उपज बारीमै कुहिने अवस्था अहिले पनि कायमै छ ।
प्रतिपक्षी कांग्रेस बैठक बोलाउन दबाब दिनुको साँटो उल्टै नेकपाको आन्तरिक कोचलोमा रमाइरहेको छ । शंका लाग्छ कतै कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी फुटाएर आफ्नो सरकार बनाउने दाउमा वा आशले र्‍याल त चुहाइरहेको छैन?
जनता रोग र कोकले तड्पिरहेका छन् । तर, हाम्रो देशको २ तिहाइको बहुमतले मात्तिएको, सत्ताको मातले रात्तिएको सरकार दिनप्रतिदिन निरह बनिरहेको छ । ओली सरकार झन् अहंकारी बन्दै गएको छ । प्रधानमन्त्री जनताको जीउधनको रक्षाको गर्नुको साँटो आफ्नो कुर्ची कसरी बचाने खेलमा व्यस्त देखिन्छन् । अहिलको अवस्था भनेको देशको रक्षा गर्ने हो । देशको अर्थतन्त्र जोगाउने हो । जनतालाई राहत उपलब्ध गराउने हो । जनताको सेवा गर्ने हो । जनताको आवाज सुन्ने हो । जनतालाई जवाफ दिने हो । यस्तो कुरा हेर्न र सुन्न नपाउनु सम्पूर्ण नेपालीको बिडम्पना भएको छ ।
सरकारले सल्लहासुझाव, प्रशंसा, आलोचना, समालोचना गर्ने ठाउँ, भ्रष्टाचारको विरुद्धमा बोल्ने ठाउँ, जन जिवीकाको पक्षमा बोल्ने ठाउँ, ढिला सुस्तीको विरुद्धमा बोल्ने ठाउँ, गलत प्रवृतिको विरुद्धमा बोल्ने ठाउँ, संसद नै स्थगित गरेर, जनताका आवाज बोल्ने, सरकारका कान खोल्ने ठाउँ नै बन्द गरेर जनताको आवाज माथिनै प्रतिबन्ध लगाएको महसुस जनताले अनुभूति गर्न थालेका छन् । अहिलेको समयमा पनि नेपाली जनता मनको भावना कुण्ठित गरेर दुःखी जीवन बिताउन बिबस देखिन्छन् ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) आज आन्तरिक किचलोमा फसेको छ । बहुमत पार्टी नेताहरू प्रधानमन्त्रीले काम गर्न नसकेको भन्दै राजीनामा मागिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ता जोगाउन संसद स्थगित गरेर कानमा तेल हालेर बसिरहेका छ्न् ।
यस्तो विषम परस्तिथिमा किन बोल्दैन प्रतिपक्षी? संसद बैठकको माग गर्ने र जनताको माग र वर्तमानको आवश्यकताको विषयमा आवाज उठाउने काम, सरकारलाई घच्चघचाउने काम, सही बाटोमा डोर्‍याउने काम, गलत कुराको आलोचना गरी सरकारलाई सच्याउन रचनात्मक सहयोग गर्ने काम प्रतिपक्षीको होइन र? किन बोल्दैन प्रतिपक्षी कांग्रेस?
आज जनताको जन जिवीकाको पक्षमा देश र जनताको पक्षमा, देशको अर्थतन्त्रको पक्षमा किन बोल्दैन प्रतिपक्षी? यस्तो महामारीको बेला किन बोल्दैन प्रतिपक्षी? किन संसद बैठक माग गरेर आफ्ना धारणा, विचार, सुझाव, आलोचना, समलोचना गर्दैन प्रतीपक्षी?
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) आज आन्तरिक किचलोमा फसेको छ । बहुमत पार्टी नेताहरू प्रधानमन्त्रीले काम गर्न नसकेको भन्दै राजीनामा मागिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ता जोगाउन संसद स्थगित गरेर कानमा तेल हालेर बसिरहेका छ्न् । तर, प्रतिपक्षी कांग्रेस बैठक बोलाउन दबाब दिनुको साँटो उल्टै नेकपाको आन्तरिक कोचलोमा रमाइरहेको छ । शंका लाग्छ कतै कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी फुटाएर आफ्नो सरकार बनाउने दाउमा वा आशले र्‍याल त चुहाइरहेको छैन?
सरकारले ४ जना निर्दोष मानिसलाई कांंग्रेस संसद अलामले ज्यूँदै इटा भट्टामा हालेर मारेको भन्दै जेल हाल्यो । कांग्रेस हत्यामा सामेल बचाउन संसददेखि सडकसम्म करायो । भ्रष्टाचार प्रमाणित भएका सौसद एवंं पार्टीका उपसभापति विजयकुमार गच्छदारलाई सरकारले जेल हाल्न खोज्दा कांग्रेसले भ्रष्टाचारी बचाउन सडकदेखि सदन ततायो । तर, आज जनताको जन जिवीकाको पक्षमा देश र जनताको पक्षमा, देशको अर्थतन्त्रको पक्षमा किन बोल्दैन प्रतिपक्षी? यस्तो महामारीको बेला किन बोल्दैन प्रतिपक्षी? किन संसद बैठक माग गरेर आफ्ना धारणा, विचार, सुझाव, आलोचना, समलोचना गर्दैन प्रतीपक्षी? त्यसैले भन्न मन लाग्यो मरेको प्रतिपक्षी !
(लेखक जोशी अनेरास्ववियू डोटीका नेता हुन्)
ट्याग्स: कांग्रेस, प्रकाश जोशी